မိဘများမှ ကလေးများကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရာတွင် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း (၁၅) ခု - LIFESTYLE » Ahmalay
မိဘများမှ ကလေးများကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရာတွင် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း (၁၅) ခု
ဒါကတော့ မိဘများအတွက်ပါ။ သင့်ကလေးတွေအတွက် အကူအညီလေးတွေများ လိုအပ်နေပါသလား။ သင့်နေ့စဉ်ဘဝ ကို အနည်းငယ်ပိုပြီး လွယ်ကူချောမွေ့ သွားစေဖို့ ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို အသုံးချခွင့် ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်အားကံကောင်းခြင်းတွေ ယူဆောင်လာခြင်းအပေါ် အခုဘဲ ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။
တကယ့်ကိုအဖိုးတန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လက်မလွတ်ဘဲ အောက်မှာ အခုဘဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ကလေးတွေကို ကားအတွင်း၌ ရန်ဖြစ်ခြင်းကို ရပ်တန့်လိုပါသလား? သကြားလုံးတွေ ဖွက်ထားဖို့ရန် အကောင်းဆုံး နေရာကို ရှာဖွေနေပါသလား? သူတို့ကို တစ်ခုခု စားနေစေချင်ပါသလား? (သို့မဟုတ်) ဆေးတိုက်ချင်ပါသလား? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ… သင့်အတွက် ကျွန်မတို့မှာ ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း ရှိနေပါတယ်။ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ဆန္ဒပြုဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ကျွန်မတို့ကို နောက်မှ ကျေးဖူးတင်နေပါလိမ့်မယ်။
#1 ဒီဥာဏ်ကောင်းတဲ့ ဖခင်လို စက္ကူ ကတ်ထူတွေကို အသုံးပြုပြီး ကားအတွင်းမှ ရန်ပွဲကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါ။
#2 ကမ်းခြေ၌ သဲများနှင့် ဝေးဝေးထားနိုင်ရန် အံကိုက်ဖြစ်တဲ့ အခင်းကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။
#3 သင့်ရဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ကလေးငယ်ကို ခြံစည်းရိုးများအား ရေဖြင့် ဆေးခြယ်စေခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်ဆုံး စေပါ။
#4 သင့်ကလေးငယ်၏ တစ်နေ့တာ အချိန်ဇယားကို အရောင်များချယ်၍ အချိန်စီမံခန့်ခွဲ့ခြင်းကို သင်ကြားပါ။
#5 သင့်ကလေး၏ ဖိနပ်အတွင်းတွင် ကပ်ခွာလေးများကပ်၍ မှန်ကန်သော ခြေထောက်တွင် စီးတတ်အောင် သင်ကြားပါ။
#6 သင့်ကလေးအား စက္ကူဗုံး အလွတ်တွင် နေစေကာ ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးမှု ရေးဆွဲမှုများကို ပြုလုပ်စေပါ။
#7 အိမ်မှုကိစ္စ အလုပ်များကို ပျော်ရွှင်စရာ ဂိမ်းများ အသွင် ပြောင်းလဲကာ ပြုလုပ်စေပါ။
#8 သင့်ကလေးအတွက် အိမ်ယာခင်းဖြင့် စားပွဲ ကြိုးပုခတ်ကို ပြုလုပ်ပေးပါ။
#9 ကော်ဖီခွက်အဖုံးအား ရေခဲချောင်း အရည်များ၏ အောက်ခံ အဖြစ် ပြောင်းလဲ အသုံးချလိုက်ပါ။
#10 ရှုပ်ထွေးနေသော အရုပ်မ၏ ဆံပင်ကို ပန်းကန်ထဲတွင် ထည့်ကာ ဆပ်ပြာနှင့် ဆံပင်ပျော့ဆေးတို့ဖြင့် လျှော်စေပါ။
#11 စက္ကူကြမ်းအလိပ်များကို အသုံးပြုပြီး အဆုံးမရှိသော White Board တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးလိုက်ပါ။
#12 သင့်ကလေးတွေကို အရမ်းမစွဲစေဘဲ ကောင်းကောင်း ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် ကစားစရာများနှင့် ကစားစေပါ။ သူတို့ တော်တော်ကြာကြာ ကစားနေပါလိမ့်မယ်။
#13 အိမ်သာစက္ကူလိပ်များကို ကစားစရာကားလေးများ ထားရန် ကားဂိုထောင်အဖြစ် ဖန်တီးပေးလိုက်ပါ။
#14 ပလက်စတစ်ဥလုံးလေးများကို စားလက်စ စုတ်လုံးများ သန့်ရှင်းမှုရှိစေရန် အသုံးပြုလိုက်ပါ။
#15 သင့်ကလေးများ ရေချိုးခန်း အိမ်သာ တံခါးအတွင်း ပိတ်မိမနေစေရန် သားရေကွင်းများကို အသုံးပြု၍ တံခါးများကို ဖွင့်ထားပါ။